April 2017 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Google Play Store ကနေ Android ဖုန်းပေါင်း ၂ သန်းကျော်မှာ FalseGuide Botnet Malware ဝင်ရောက်နေ
Maung Pauk at 8:59:00 PM 0
တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ Google Play မှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Botnet ကွန်ရက်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ။
နာမည်ကျော် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Check Point က မိုဘိုင်းတိုက်ခိုက်မှုလေ့လာရေးပညာရှင်တွေဟာ Android Devices ပေါင်း သန်းချီမှာ Malware အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုး ကူးစက်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
FalseGuide လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Botnet အမျိုးအစား Malware ဟာ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးကို Network တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ အဆိုပါဖုန်းတွေအားလုံးကို အဝေးကနေ လှမ်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ Malware ဟာ Google ရဲ့ တရားဝင် App Store ဖြစ်တဲ့ Google Play ကနေ ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး၊ ဂိမ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လမ်းညွှန် Guide Apps ၄၀ ကျော်မှာ လှို့ဝှက်စွာထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ Check Point က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ဒီ Malware နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Google ကို ကျနော်တို့ အကြောင်းကြားပြီးပါပြီ။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီ Malware ကော၊ ဒီ Malware ပါတဲ့ Apps တွေအားလုံးကို App Store ကနေ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါပြီ”
လို့ Check Point ရဲ့ Researchers တွေက ၎င်းတို့ရဲ့ Blog Post မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပထမတွေ့ရှိချက်အရ FalseGuide Malware ကူးစက်ခံနေရတဲ့ Devices ပေါင်း ၆၀၀,၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပေမယ့်၊ နောက်ထပ် ဒီ Malware ရှိတဲ့ Apps အသစ် ငါးခုကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်၊ အခုဆိုရင် Android Devices ပေါင်း ၂ သန်းလောက်မှာ ဒီ Malware ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ်တွေ့ရှိတဲ့ Apps အသစ်ငါးခုဟာ Google Play ဆီမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလလောက်ကတည်းက ရောက်နေတာဖြစ်တာကြောင့်၊ ငါးလလောက် Google က စစ်ဆေးသူပညာရှင်တွေ မသိအောင် ပုန်းလျှိုးနိုင်ခဲ့တာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဆိုပါ Apps တွေကို Develop လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက “Анатолий Хмеленко” က ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
FalseGuide Malware ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Adware တွေ ထည့်သွင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ “Botnet” တစ်ခုကို တိတ်တဆိတ်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Researchers တွေက ဆိုပါတယ်။
“Botnet” ဆိုတာ Virus ကူးခံနေရတဲ့ Device Network တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ခိုက်သူတွေအနေနဲ့ ပိုင်ရှင်တွေ မသိအောင် Network တစ်ခုလုံးကို Remote ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကတော့ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီ Malware ပါတဲ့ App တစ်ခုကို Install လုပ်ပြီဆိုရင် မလိုအပ်တဲ့ Device Admin Permission ကို တောင်းပြီး၊ အဆိုပါ Permission နဲ့ User က Delete မလုပ်နိုင်အောင် ရှောင်ရှားထားပါတယ်။ ပြီးနောက် ဒီ Malware ဟာ Firebase Cloud Messaging မှာ သူ့ဘာသာ Register လှမ်းလုပ်လိုက်ပါတယ်။ Subscribe လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Malicious Code ပါတဲ့ Modules တွေကို ထပ်မံ Download ပြုလုပ်ကာ တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖုန်းတွေ၊တက်ဘလက်တွေမှာ Boot လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Background Service တစ်ခု Run လာမှာဖြစ်ပြီး၊ တရားမဝင်ကြော်ငြာတွေ ပြလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ Modules တွေမှာ ဖုန်းကို Root ပြုလုပ်နိုင်တဲ့၊ DDoS Attack ပြုလုပ်နိုင်တဲ့၊ Private Network တွေကိုတောင် ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ Malicious Code တွေ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
Google Play ဟာ အခုနောက်ပိုင်းမှာ လုံခြုံရေးပိုင်း တော်တော်အားနည်းလာတာတွေ့ရပြီး၊ Malware ပါတဲ့ Apps တွေ ခဏခဏတွေ့လာရတာ တွေ့ရပါတယ်။ User တွေအနေနဲ့ Play Store ကိုပဲ အားကိုးလို့မရတော့ဘဲ၊ ကိုယ့်ဖုန်း၊တက်ဘလက်မှာ အနည်းဆုံး Security App တစ်ခုလောက် ထားသုံးသင့်လာပါပြီ။ ဒီ့အပြင် Apps တွေကို Install လုပ်ရာမှာလည်း သူတောင်းတဲ့ Permissions တွေကို သေချာကြည့်သင့်ပြီး၊ မလိုအပ်တဲ့ Permission တွေတောင်းရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
Credit : http://techx.com.mm
VEGAS Pro 14.0 Full
Maung Pauk at 11:58:00 PM 0
Video Editing လုပ်တဲ့ Software ပါ.. Windows 64bit အတွက်ဖြစ်ပါတယ်.. Video Editing နဲ့ပတ်သက်လို့ ခုနောက်ပိုင်းအသုံးများလာတဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. မူရင်းဆိုဒ်မှာ 599 ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းနေတာပါ..
Features အပြည့်အစုံကို http://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/ မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
Install မလုပ်ခင် အထဲမှာပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို အရင်ဖတ်ပါ..
Saw Eh Lor တင်ပေးထားတဲ့လင့်ကိုပဲ ပြန်ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်..
Download Vegas Pro 14 : 421.2 Mb
Mobile Fonts Phone Application နည်းလမ်းများ
Manual Myanmar Fonts ထည့်သွင်းနည်း
(5.0 To 7.0 Any Model) For Beginner
Android Version 5.0 အထက် Devices တွေမှာ Unicode ပါဝင်ပြီး သားပါ Unicode နဲ့အဆင်ပြေရင်တော့ ပြောင်းစရာမလိုပဲ အဆင်မပြေရင်တော့ Zawgyi ပြောင်းကြပါတယ်
ကျနော်ဘာလို့ Any Model လို့ပြောရတာလည်းဆိုတော့ Fonts တွေကြည့်တတ်ရင် ပြောင်းလို့ ရပါတယ် Unicode ပါပြီးသားဆိုတော့Unicode Fonts ကဘယ်နားမလည်း ဘာနာမည် နဲ့လည်း အာ့ကို သိအောင်လုပ် သိရင် အာ့နေရာမှာ zawgyi ကို Replace လုပ်ရုံပါပဲ Samsung 7.0 တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ.. အာ့တော့ဘယ်လိုစစ်မလည်း Unicode ကဘယ်မာလည်းဆိုတာ Manual နည်း နဲ့လုပ်နေကျသူတွေကတော့ ဒီ Command နဲ့ နာမည် ကြည့်ရုံနဲ့သိတယ် adb shell ls -al system/fonts
မကြည့်တတ်သေးရင် ဒီ Command နဲ့ Fonts တွေကို ထုတ်လိုက်
adb pull system/fonts
ထွက်လာတဲ့ Fonts တွေကို Large icons View နဲ့ကြည့်
ပုံလေး ပြထားတယ် အာ့လိုလေး ပေါ်နေတဲ့နေရာက Fonts နေရာတွေ
မှာ Zawgyi Fonts ကို Replace လုပ်ရုံပဲ
Fonts ကတော့ များသောအားဖြင့် ကိုကျော်စွာသွင်ရေးထားတဲ့
Smart Zaygyi ကိုသုံးပါတယ်
ပထမဆုံး smartzawgyi.ttf ကို data/local/tmp ထဲသွင်းမယ်
root access ယူမယ် system ကို mount လုပ်မယ် ပြီးရင် Large icon
နဲ့ကြည့်ထားတဲ့ Unicode နေရာတွေမှာ Replace လုပ်နောက်ဆုံး
Fonts တွေကို Permission ပေးပြီး Reboot ချမယ်
adb push smart.ttf data/local/tmp
dd if=/data/loca/tmp/smart.ttf of=/system/fonts/name.fonts
name.fonts နေရာမှာ အပေါ်မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ Unicode Fonts နာမည်
တွေထည့်ပေးပါ လေးခုပါရင် လေးခုလုံးပြောင်းပါ ပါသလောက်ပြောင်းပါ
dd if=/data/loca/tmp/smart.ttf of=/system/fonts/NotoSansMyanmar-Bold.ttf
အကုန်လုံးပြောင်းပြီးရင် Permission ပေးမယ်
တခုခြင်းပေးလည်း ရတယ် ကျနော်ကတော့ ရိုက်ရတာ ပျင်းတော့
chmod 0644 system/fonts/*
နဲ့အကုန်ပေးလိုက်တယ် ပြီးရင် reboot လို့ ရိုက်
ပြန်တက်လာရင် Myanmar Fonts ရပါပြီ
TWRP သွင်းထားတဲ့အလုံးတွေ Root မလုပ်ပဲ Myanmar Fonts
ထည့်နည်းနဲ့ အသေးစိတ် သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Mobile Solution Myanmar (MSM) မှာ တင်ပေးထားပါတယ်
Credit : Thar Juu
Computer software Microsoft Programming Softwares
Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 Full
Maung Pauk at 11:31:00 PM 0
Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 ကို Trial Version ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဆိုဒ်ပေါ်က ဒေါင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်. Key လိုချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီးသွားရင် အင်တာနက်ကို ပိတ်ပါ.. ကီးဖြည့်ပါ.. Software ကို Run တဲ့အခါတိုင်း Login ဝင်မှာလားမေးရင် ဘယ်တော့မှ မဝင်ပါနဲ့...
Download Visual Studio Enterprise 2017 Setup: 20.29 Gb
Download Serial Key.zip : 1 Kb
Tips and Tricks Xiaomi
Xiaomi MIUI 8 အတွက် Tips & Tricks များ
အိုင်ကွန်များကို နေရာချပါ။ဖုန်းမှာ Apps များ ထည့်သွင်းလာတာနဲ့ အမျှ Home Screen မှာ ရှုပ်ပွနေမှာပါ။ MIUI 8 မှာတော့ ဖုန်းကို လှုပ်ခါလိုက်တာနဲ့ Apps များကို နေရာတကျ ထားရှိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ref : xiaomitips , gizbot
Firmware PAC ဖိုင်တွေကို တင်တဲ့ ResearchDownload_Ver6.0.0001
Maung Pauk at 2:11:00 AM 0
Firmware တင်တဲ့အခါ .pac ဖိုင်တွေကို ResearchDownload နဲ့ တင်ကြရပါတယ်.. ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ နောက်ဆုံးထွက် ResearchDownload_Ver6.0.0001 ဖြစ်ပါတယ်..
ResearchDownload_Ver6.0.0001 : 4.63 Mb
Android Tool Meizu Phone Application
Meizu U20 User lock Remove With Spflashtool
Maung Pauk at 10:28:00 PM 0
အထဲမှာ Sp Flashtool ကောထည့်ပေးထားတယ်ဗျ.. ကိုယ်တိုင်လည်း စမ်းဖြုတ်ပြီးပီ All Fine ပါတယ်
Sp Flashtool လေးဖွင့် Download-Agent မှာ DA_PL.bin ကိုရွေး Scatter လေးရွေး Download Only နဲ့ရေးချလိုက် User Lock ပြုတ်ကော..
Zip Password = htetrkar
Credit : Htet R Kar
Download Meizu U20 User lock Remove With Spflashtool : 245.413 Mb
Computer software Linux OS
Feature အသစ်တွေပါလာတဲ့ Kali Linux 2017.1 Download
Maung Pauk at 4:39:00 PM 0
Penetration Testing and Security Auditing ( ထိုးဖောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှု စစ်ဆေးခြင်း ) အတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပြီး Linux ကိုအခြေခံထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် ( Operating System ) တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kali Linux ဟာ Web Security သမားတွေ၊ Hacker တွေနဲ့ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကြား အသုံးများလှပါတယ်..
ခုတစ်ပတ်ထွက်လာတဲ့ Kali Linux 2017.1 မှာ RTL8812AU Wireless Card Injection စနစ်အပြင် CUDA GPU Cracking နဲ့ Amazon AWS and Micsosoft Azure Availability (GPU Support) စနစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းပြီး ပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်.. Kali Linux ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ်ကျယ်ပြန့်တာကြောင့် ဒီနေရာမှာ အကျယ်တဝင့် မဖေါ်ပြတော့ဘဲ ခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Kali Linux 2017.1 Release လေးကိုပဲ ဒေါင်းယူနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ISO ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းယူနိုင်သလို Torrent ဖိုင်ကိုအရင်ဒေါင်းပြီးမှ Torrent နဲ့ ISO ကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်...
Kali 64 bit ISO | Torrent 2.6Gb 2017.1 49b1c5769b909220060dc4c0e11ae09d97a270a80d259e05773101df62e11e9d
Kali 32 bit ISO | Torrent 2.7Gb 2017.1 501b3747e5ac7c698217392fe49ec21dacee277404500fc49d4a0ee82625aabe
Kali 64 bit Light ISO | Torrent 0.8Gb 2017.1 5c0f6300bf9842b724df92cb20e4637f4561ffc03029cdcb21af3902442ae9b0
Kali 32 bit Light ISO | Torrent 0.8Gb 2017.1 6c83101ecf8702c7d93d32562e822b639d5c577314b448e3b8330995e0f07e0f
Kali 64 bit e17 ISO | Torrent 2.4Gb 2017.1 ae293cf679f38a4f17d090a272ccb13d7619e66d4502374154186c12891fb99c
Kali 64 bit Mate ISO | Torrent 2.6Gb 2017.1 3ea748aa8c5f50d80f020acdbca5f0398ee90242bb4413c12985e1865186ca9e
Kali 64 bit Xfce ISO | Torrent 2.5Gb 2017.1 8a17c2f54850585760b9d32a22e26df9a28f395b401753fa0a9b298aef4c4593
Kali 64 bit LXDE ISO | Torrent 2.5Gb 2017.1 35eae65aaaabba8188dfd963e45b7b4d76e0684e7721c7d232cf18320b7cae3b
Kali armhf ISO | Torrent 0.5G 2017.1 a75199aa8a3d7b64561bc03fcd6e3ff8b94743c8769eecfaa4b719f04f7cbb63
Kali armel ISO | Torrent 0.4Gb 2017.1 180414422196f0797c1ea5f3c18682bc4b3ced871cb3e874e90de52dd4af877c
Home Page : https://www.kali.org/
Miracle Box v2.29 Full Cracked Free Download
Maung Pauk at 12:34:00 AM 0
Miracle ကို Box စက်မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Cracked Software ဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းပြင်တဲ့ဆရာတွေ အကြိုက်ပေါ့ဗျာ.. ခု v2.29 ကို Full Cracked ရထားလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... zip ဖိုင်ကို ဖြည်ချပြီး Run Me Miracle Box ဆိုတဲ့ exe ဖိုင်လေးကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as Administrator နဲ့ Run ရုံပါပဲ.. Run တိုင် Run as Administrator နဲ့ ပဲ Run ရမှာပါ.. အဲလိုမလုပ်ချင်ရင် Run Me Miracle Box.exe ကိုညာကလစ်ထောက်၊ Properties ကိုနှိပ်. အပေါ်တန်းက Compatibility ကိုတစ်ချက်နှိပ်၊ Run this program as an administrator ကိုအမှန်ခြစ်ပြီး OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. နောက်ဆို Double Click ပဲ ခေါက်နိုင်ပါပြီ...
Thanks : Min Oaker
Miracle Box v2.29 Full Cracked Free Download : 74.16 Mb
Firmware Samsung Samsung Firmwares
Samsung Galaxy On7 SM-G6100 (4 file) Full Repair Firmware
On7 Full Firmware : 1.4 Gb
Password : cellphones
ဖုန်းတလုံး ဘာ CPU သုံးတယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ဖို့ Platform Detector Tool
ဖုန်းတလုံး ဘာ CPU သုံးတယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ဖို့ Platform Detector Tool ပါ
Infinity Team က Free ပေးထားတဲ့ Tool ပါ.. Box / Dongle မလိုအပ်ပါဘူး
Download Platform Detector Tool : 1.1 Mb
Google Play Store ကနေ Android ဖုန်းပေါင်း ၂ သန်းကေ...
Firmware PAC ဖိုင်တွေကို တင်တဲ့ ResearchDownload_V...
Samsung Galaxy On7 SM-G6100 (4 file) Full Repair F...
ဖုန်းတလုံး ဘာ CPU သုံးတယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ဖို့ ...